7 Calaamadood Uma baahnid Ad Ad Server | Martech Zone
7 Calaamadood Uma baahnid Ad Ad Server
Bixiyeyaasha teknolojiyadda badankood waxay isku dayi doonaan inay kaa dhaadhiciyaan inaad u baahan tahay server xayeysiis, gaar ahaan haddii aad tahay shabakad xayeysiis oo mug leh maxaa yeelay taasi waa waxa ay isku dayayaan inay iibiyaan. Waa gabal awood badan oo softiweer ah oo gaarsiin kara kobcinta la qiyaasi karo shabakadaha xayeysiiska qaarkood iyo ciyaartoy kale oo teknolojiyad ah, laakiin server -ka xayeysiintu maahan xalka saxda ah ee qof walba xaalad kasta.
10kii sano ee aan ka shaqaynaynay warshadaha, waxaan ka fikiray ganacsiyo badan inay helaan adeegaha xayeysiiska xitaa markay sida cad u baahnayn mid. Asal ahaan, badiyaa had iyo jeer waa sababaha isku midka ah. Marka, aniga iyo kooxdaydu waxaan ku soo koobnay liistada toddobo calaamadood sababta aad u tixgelinayso beddelka xalka server -ka xayeysiiska.
Ma lihid wax xiriir ah oo aad ku iibsato ama ku iibiso taraafikada
Adeega xayeysiiska wuxuu ku siinayaa farsamada aad u baahan tahay si aad u abuurto ololeyaal oo aad u dhigto daabacayaasha si xayeysiiyayaal leh xaalado boos-ku-meelayn oo aad gacantaada ku dejisay. Kuma siinayso daabacayaasha iyo xayeysiiyayaasha laftooda. Haddii aadan hore u haysan helitaanka sahayda ku filan iyo wada -hawlgalayaasha dalbashada, macno ma samaynayso inaad bixiso xalka software -ka kaa caawiya inaad maarayso isku -xidhkaas.
Taa bedelkeeda, waa inaad heshaa madal iibsi warbaahineed oo iskaa wax u qabso ah kaas oo siiya lamaanayaal horay loo dejiyay taraafikada ganacsiga ama la shaqeeya shabakad xayeysiis si kor loogu qaado baahiyahaaga iibsiga warbaahinta. Shabakadda xayeysiiska ee aad la wadaagto waxay leedahay isku xirnaanta lagama maarmaanka u ah ka ganacsiga mugga sare, marka waa iyaga uun kuwa ka faa'iideysan doona astaamaha server-ka xayeysiiska ee u saamaxaya inay si fudud u maareeyaan sahaydooda iyo dalabkooda gudaha.
Waxaad raadineysaa xal adeeg buuxa ah
Haddii aad raadinayso xal kuu oggolaan doona inaad joojiso waqtigaaga iyo kheyraadka aad ku bixinayso adeegga xayeysiiska gacanta, waxaa fiicnaan lahayd inaad la tashato hay'ad xayeysiis. Haddii aad doorato inaad adeegsato server -ka xayeysiiska, waxaad kaalmo ka heli doontaa softiweerka marxaladda dul -saaran waxaadna ku raaxaysan doontaa khibrad adeeg xayeysiis oo aad loo maareyn karo oo ka badan intii aad ku heli lahayd xal isku -dhafan ama dibadda ah, laakiin ma noqon doontid awood u leh inaad maydho gacmahaaga xayeysiiska gacanta oo si buuxda u adeegaya.
Waxa server -ka xayeysiisku kuu samayn doono wuxuu hagaajinayaa ku -noqoshadaada qarashka xayeysiiska (ROAS) oo leh falanqayn hufan iyo bartilmaameed la beddeli karo oo ku saabsan madal maareyn is-adeegsi, laakiin weli waa inaad gelisaa waqtiga iyo tamarta si aad u maamusho xiriiradaada iyo ololahaaga.
Diyaar uma tihid dhammaystirka hoyga
Adeega xayeysiiska ee sumadda cad leh micnaheedu waa inaad hesho lahaansho dhammaystiran oo madal ah, taasoo kuu oggolaanaysa inaad gabi ahaanba habayso ololahaaga oo aad joojiso bixinta khidmadaha dhexdhexaadiyaha. Taasi way u fiican tahay kuwa diyaar u ah inay ku keenaan xalka xayeysiinta ee guriga dhexdiisa ah, laakiin kuwa kale, habaynta iyo hufnaanta kharashku ma noqon karto mudnaanta.
Haddii aad hadda isticmaaleyso is-adeegsi DSP ama madal kale oo xayeysiis ah oo aad ku faraxsan tahay xalkaaga isku-darka ah, waxaa laga yaabaa inaadan diyaar u ahayn inaad keento xayeysiiskaaga oo u adeegaya guriga dhexdiisa. Dib-u-bixinta qaar ka mid ah mas'uuliyaddaas waxaa laga yaabaa inay siiso dheefaha muddada gaaban kuwa aan si mug leh wax uga qaban. Si kastaba ha ahaatee, shabakadaha loo diyaariyey inay wax ka qabtaan 100% ololahooda iyo iskuxirkooda ayaa wax badan ka faa'iideysan doona maareynta mareegtooda la beddeli karo.
Waxaad u adeegtaa wax ka yar 1 milyan oo aragti bishiiba
Moodooyinka qiimeynta server -ka xayeysiiska ayaa sida caadiga ah ku saleysan tirada aragtiyaha aad bil kasta u adeegto. Kuwa u adeega wax ka yar 10 milyan oo riyooyin ayaa heli kara xirmooyin aasaasi ah, laakiin haddii muggaagu aad u hooseeyo, waa inaad tixgelisaa haddii qiimaha uu u qalmo, ma aha in la xuso in kakanaanta server -ka xayeysiiska ee horumarsan ay u badan tahay inuu noqon doono mid aad u sarreeya baahiyaha.
Waxaad u baahan tahay qalab fudud oo leh dhowr astaamood oo muhiim ah
Haddii aadan waligaa adeegsan server -ka xayeysiiska, tirada badan ee astaamaha iyo xulashooyinka ayaa noqon kara mid xad -dhaaf ah. Goobaha adeegga xayeysiiska ee casriga ah waxay si joogto ah u bixiyaan in ka badan 500 astaamood oo loogu talagalay bartilmaameedka, falanqaynta, wanaajinta, raadraaca beddelka, iyo guud ahaan maaraynta hufan. In kasta oo ay u muuqato mid lagu daray inta badan, adeegsadayaasha qaarkood waxay u arkaan astaamahan inay yihiin dib -u -dhac sabab u ah waqtiga ay qaadanayso in la barto oo ay bilaabaan inay ka faa'iidaystaan. Haddii mugga ganacsigaaga xayeysiiska uusan u baahnayn xal horumarsan, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tixgeliso aalad fudud.
Si kastaba ha noqotee, haddii mid ka mid ah calaamadaha kale ee liiskan ku khuseeya oo aad u malaynayso inaad diyaar u tahay xalka la beddeli karo oo kharash badan leh sida server-ka xayeysiiska, waa inaadan u oggolaan in kakanaanta ay ku cabsi geliso. Xirfadlayaal khibrad leh ayaa si dhakhso ah u baran kara shaqooyinka waxayna ka faa'iideysan karaan astaamaha hagaajinta ololaha.
Waxaad rabtaa inaad ku iibsato taraafikada barnaamij ahaan
Adeega xayeysiiska ayaa ah aalad ku habboon iibinta warbaahinta tooska ah, laakiin maahan xal barnaamij. Haddii aad rabto inaad iibsato barnaamij ahaan, madal dhinac-dalbaduhu waa xalka ugu fiican baahiyahaaga. Waxaad heli kartaa DSP-calaamad cad oo aad si buuxda ugu habayn karto baahiyaha ganacsigaaga. Iyadoo leh RTB hindise-bixiyaha udub-dhexaadkiisa, madal dhinac-dalbasho ah ayaa awood kuu siineysa inaad si otomaatig ah iyo waqtiga-dhabta ah u iibsato aragtiyaha.
Ma doonaysid inaad kasbato wax badan
Kani waa kiis naadir ah, laakiin waxaa macquul ah in ganacsiyada qaarkood aysan diyaar u ahayn inay kor u qaadaan dakhligooda. Kordhinta xalka software -kaaga ayaa laga yaabaa inay u baahan tahay dul -saarid iyo tababar aad u ballaaran oo aadan diyaar u ahayn inaad fuliso. Haddii aad ku qanacsan tahay dakhligaaga iyo heerka wanaajinta hawlgallada ganacsigaaga xayeysiiska ee hadda, waxaad dooran kartaa inaadan maalgelin kobcinta waqtigan. Iyadoo aan lahayn dhiirigelin koritaan ama hufnaan, ma jirto sabab loo iibsado server -ka xayeysiiska.
Ma jiraan kuwaan mid adiga ku khuseeya?
Haddii mid ama in ka badan oo ka mid ah calaamadahan ay kugu soo dhacaan guriga, malaha ma ahan waqtigii kugu habboonaa inaad maal gashato server -ka xayeysiiska. Si kastaba ha noqotee, haddii mid ka mid ah calaamadahan uusan ku quseyn, waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii aad si qoto dheer u eegi lahayd faa'iidooyinka adeegayaasha xayeysiiska. Adeega xayeysiiska waa alfa iyo omega xayaysiis, waxayna garaaci kartaa mid kasta oo ka mid ah xayeysiisyada kale ee u adeega aaladaha marka la eego habaynta, kharash-ku-oolnimada, iyo maareynta oo ku habboon baahiyaha dhabta ah ee ganacsigaaga.
Hel Tijaabo Bilaash ah ee Epom Ad Server
Tags: server adadvertisingserver xayaysiisDSPwaqtiDareenkaiibinta waqtiga-dhabta ahrtbu adeeg xayeysiisyada
Lina waa Madaxa Suuqgeynta ee EPOM. Waxay kaloo leedahay waayo -aragnimo xoog leh oo ku aaddan hoggaaminta isgaarsiinta meelo kala duwan, laga soo bilaabo warbaahinta dhaqanka ilaa dadka saamaynta leh. Markay tahay EPOM, waxay abuurtaa wacyiga macmiilka waxayna u kaxaysaa doorbidista macaamiisha ee astaanta iyada oo loo marayo dhammaan kanaallada suuqgeynta dhijitaalka ah maalin kasta.
Moqups: Qorshe, Naqshad, Qaab -dhismeed, iyo Wadashaqeyn Wireframes iyo Jeesjeesyo Faahfaahsan
Isbeddellada Suuq -geynta Macluumaadka B2B